ग्रह राशि परिवर्तनको हिसाबले कात्तिक महिना केही राशिको भाग्य चम्किने देखिएको छ । यही महिनाको १६ गते मंगलबारदेखि बुध ग्रह कन्या राशिबाट निस्केर तुला राशिमा गोचर गर्दैछ । जहाँ यो मंसिर ५ गतेसम्म रहने र त्यसपछि वृश्चिक राशिमा गोचन गर्नेछ । कात्तिक १३ गते सूर्य तुला राशिबाट निस्केर वृश्चिकमा जानेछ । ग्रह र नक्षत्रको हिसाबले कात्तिक महिना त्यसमाथि पनि यसपटकको तिहार केही राशिका लागि शुभ हुने देखिन्छ ।
यसपटकको तिहारमा राशिको अवस्था : तिहार अर्थात यमपञ्चकको समयमा चन्द्र, मंगल, सूर्य र बुध तुला राशिमा रहने छ । शनि र वृहस्पति पहिलेदेखि नै मकरमा रहेका छन् । शुक्र ग्रह धनुमा र राहु ग्रह वृष राशिमा रहने छ ।
यि राशिका लागि यसरी शुभ रहने
मेष, कर्कट, कन्या र मकरका लागि अत्ति उत्तम । मिथुन, सिंह, वृश्चिक , धनु र मीनका लागि उत्तम । र, बाँकीका लागि सामान्य रहने छ । कस्तो छ त तिहारमा राशिहरुको अवस्था?
१. मेष : मेष राशिका लागि यो तिहार अति शुभ छ । यो राशि हुनेहरुको लागि हर क्षेत्रमा जित सुनिश्चित छ । आर्थिकरुपमा पनि अवस्था सुदृढ रहने छ । पारिवारिक जीवन पनि खुसीले भरिपूर्ण हुने छ । नोकरी पेशामा मानसम्मान बढ्ने छ । स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ ।
२. वृष : यो राशि हुनेका लागि तिहार मिलिजुली फल दिने हुनेछ । प्रतियोगी परीक्षामा सफलता हात परे पनि अन्य क्षेत्रमा सफलताको सम्भावना कम छ । हरेक क्षेत्रमा पराक्रम आवश्यक देखिन्छ । परिवारलाई खुशी राख्न र स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ ।
३.मिथुन : यो राशि हुनेको दाम्पत्य जीवनमा मधुरता छाउनेछ । बेरोजगार छन् भने रोजगारीको कृपा यस तिहारमा मिल्नेछ । व्यापारीहरुलाई माता लक्ष्मीको कृपा मिल्ने छ । विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यही तिहारले खुशीको सञ्चार गराउने छ । आत्मविश्वास पनि बढ्ने छ । धनलाभ हुनाले सामाजिक समस्याको समााधान हुनेछ ।
४. कर्कट : कर्कट राशि हुनेहरुका लागि तिहार अत्ति उत्तम समय छ । नोकरीमा उन्नति हुने र व्यापारमा लाभ हुने अवस्था छ । बेरोजगारको रोजगारी मिल्ने सम्भावना छ । धनलाभ र लगानीको अवस्था आउने छ । यात्राको संयोग पनि जुर्ने देखिन्छ ।
५.सिंह : सिंह राशि हुनेहरुको मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ । नोकरीमा पदोन्नतिको योग छ । व्यापार र व्यवसायमा लाभ मिल्नेछ । विद्यार्थीका लागि अनुकुल समय बन्नेछ ।
६. कन्या : कन्या राशि हुनेहरुको लागि तिहार उत्तम समय बन्नेछ । काम धन्दा राम्रोसंग चल्नेछ । नोकरीमा उन्नत्ति हुनेछ । परिवारमा खुसीको माहोल हुनेछ । कुनै पनि किसिमकाट गरिएका लगानीबाट लाभ मिल्नेछ । स्वास्थ्य सामान्य रहनेछ ।
७. तुला : तुला राशि हुनेहरुको लागि मिलिजुली फल मिल्ने अवस्था छ । सतर्क रहेर कठिन परिश्रम गर्न भने आवश्यक छ । परिवारलाई ध्यान दिन आवश्यक छ । नोकरीपेशामा सावधानी अपनाउन जरुरी छ । ध्यान पुर्याएर मात्र लगानी गर्नु उचित हुनेछ ।
८. वृश्चिक : यो राशि हुनेहरुका लागि बिभिन्न कारोबारबाट लाभ हुने देखिन्छ । कार्यालयमा प्रतिष्ठा बढ्ने छ । धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने अवसर मिल्नेछ । संकट निवारण हुने र सुख मिल्ने योग देखिन्छ ।
९. धनु : धनु राशि हुनेहरुका लागि समय अति राम्रो छ । नोकरी पेशामा पदोन्नति हुने योग छ । कार्य क्षेत्रमा गरेको मेहनतको सबैले प्रशंसा गर्नेछन् । व्यापारी वर्गलाई शुभ फल प्राप्त हुने अवस्था छ । पारिवारिक जीवन खुसीले भरिनेछ । आर्थिक पक्ष अति सबल हुने सम्भावना छ ।
१०. मकर : यो राशि हुनेहरुको लागि समय फाइदाजनक छ । नोकरी र व्यवसायमा सफलता हात पर्नेछ । धेरै समस्याहरु सुल्झिनेछन् । विद्यार्थी वर्गका लागि खुसीको खबर प्राप्त हुने छ । लगानीबाट लाभ मिल्नेछ ।
११. कुम्भ : यो राशि हुनेहरुका लागि समय मिलिजुली फल दिने खालको छ । स्वास्थ्यमा ध्यान दिने हो भने तिहारसहित यो कात्तिक महिना अति राम्रो हुने छ । व्यापारमा अवस्था सामान्य हुँदा नोकरीमा अवस्था उत्तम छ । घरमा मांगलिक कार्यको पनि सम्भावना छ ।
१२. मीन : मीन राशी हुनेहरुका लागि समय उत्तम छ । कुनै महत्वपूर्ण काममा सफलता मिल्नेछ । नोकरी पेशामा खुसीको समाचार सुन्न पाइनेछ । परिवारमा खुसी र सुखको अवस्था बढ्ने छ । यो राशि भएका विद्यार्थीहरु परीक्षा प्रतियोगितामा सफल हुने योग छ । पेटमा समस्या हुँदा अपच हुने खतरा देखिन्छ । शत्रु सक्रिय रहनेछन् । शेयर बजार, लट्री, सट्टपट्टा जस्तो क्षेत्रमा भने हानी हुने सम्भावना देखिन्छ ।
स्रोत : वेव दुनियाँ